काभ्रेलाई उत्कृष्ट आर्थिक गन्तव्य बनाउनुपर्छ - Karobar National Economic Daily
काभ्रेलाई उत्कृष्ट आर्थिक गन्तव्य बनाउनुपर्छ
query_builderAugust 11, 2017 9:12 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility931
प्रकाश मानन्धर अध्यक्ष काभ्रे उद्योग वाणिज्य संघ
पछिल्लो समयमा काभ्रेमा उद्योग व्यवसाय खुल्ने क्रम बढेको छ । सरकारले काभ्रेको पाँचखालमा सेज स्थापना गर्ने घोषणा गरेसँगै यहाँका उद्योगी व्यवसायी पनि उत्साहित भएका छन् ।
काभ्रे उद्योग वाणिज्य संघ पनि जिल्लामा व्यवसायिक गतिविधि बढ्न थालेकोमा निकै उत्साहित छ । संघको नेतृत्व अहिले प्रकाश मानन्धरले लिएका छन् । उनी लामो समयदेखि व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहँदै आएका छन् । पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि व्यापारिक नै भएकाले उनी संघको नेतृत्वमा पुग्न सफल भए ।
१६ वर्षअघि काभ्रे उद्योग वाणिज्य संघमा सदस्य बनेर प्रवेश गरेका मानन्धर केही समयअघि सम्पन्न ३९ औं वार्षिक साधारणसभाबाट काभ्रे उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । उनै मानन्धरसँग काभ्रेको उद्योग व्यवसायको अवस्था, संघका भावी योजनालगायतका विषयमा कारोबारले गरेको कुराकानीको सार ः
पछिल्ला दिनमा काभ्रेमा उद्योगको अवस्था कस्तो छ ?
काभ्रेमा साच्चिँकै भन्ने हो भने आशालाग्दो हिसाबले उद्योग क्षेत्रमा विकास हुन सकेको छैन । होटल ब्यवसाय फस्टाउँदै गए पनि ठूलाठूला उत्पादनमूलक उद्योग भने सञ्चालनमा आएका छैनन् ।
गुणस्तरीय र सुविधायुक्त होटल भने सञ्चालनमा छन् । तर धेरै मानिसलाई रोजगार दिने गरी उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन । जसरी होटलमा लगानी थपिएको छ, अन्य उद्योग, कलकारखानामा लगानी हुन सकेको पाइँदैन । अझ भूकम्पपछि राजधानीपूर्वको मुख्य ब्यापारिक केन्द्र बनेपामा मानिसको बसोबास निकै बढेको छ ।
काम भएन भने मान्छेमा नकारात्मक सोच बढ्छ । त्यस्तो सोच समाजका लागि पनि हानिकारक हुन्छ । त्यसैले ती ब्यक्तिलाई समेत रोजगार दिने गरी ब्यवसायीले लगानी विस्तार गर्न थालेका छन् ।
उसो भए धेरै मानिसले रोजगार पाउने पाँचखालको सेज निर्माणमा तपाईंहरूले किन पहल गर्नुभएन त ?
हो । तपाईंले भने जस्तै पाँचखालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज निर्माण हुँदैछ । जग्गा अतिक्रमण गर्ने काम भइसक्यो । हामीले पटक–पटक सेज निर्माणलाई छिटो पूरा गर्न पहल गरिरहेका छौं । तर राज्य पक्षबाट यसलाई हुनुपर्ने जति सहयोग भइरहेको छैन ।
पाँचखालको सेज विशेषगरी तातोपानी नाकामार्फत सामान निर्यातका लागि सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो । त्यो नाका भूकम्पपछि पूर्णरूपमा बन्द छ । मैले कता कता सुनेको छु नाका बन्द भएकै कारण राज्यले चासो नदिएको हो । सेज निर्माणका लागि म थप पहल गर्ने छु ।
सेज सञ्चालनमा आयो भने काभ्रे जिल्लाकै मुहार फेरिने हो । त्यहाँ धेरैले रोजगार पाउँछन् । त्यसो भयो भने मानिसको आम्दानी बढ्छ । विदेशीने युवाको संख्यामा पनि कमी आउँछ ।
जिल्लामा सेजबाहेक अन्य उद्योग सञ्चालनमा आउन सक्दैनन् ?
जिल्लामा कृषि उद्योगको सम्भावना निकै छ । त्यस्तै पर्यटन उद्योगको सम्भावना नभएको होइन् । कुषि खेतीमा लगानी बढ्दो छ । तर उद्योगमा लगानी गर्न चाहनेको संख्या निकै कम छ ।
मैले आफ्नो कार्यकालमा कृषिजन्य उद्योग स्थापनाका लागि विशेष पहल गर्ने योजना बनाएको छु । हामीले विगत ४ वर्षदेखि एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं । ओभीओपीअन्तर्गत कुशादेवी, पात्लेखेत र बनेपामा दुग्धजन्य परिकार उत्पादन भइरहेका छन् । त्यस्तै एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम पनि सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ ।
ओडिओपी कार्यक्रमअन्तर्गत मासु प्रशोधन उद्योग सञ्चालनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । यदि मासु प्रशोधन बनेपामा राख्न सकियो भने हाल उपत्यकामा कम मूल्यमा जिउँदै पशु चौपाया बेच्दै आएका जिल्लाका कृषकले बढी मूल्य पाउने छन् । उपभोक्ताले मासु पनि स्वथ्य खान पाउँछन्, रोजगारी पनि बढ्छ । त्यो बाहेक लोप हुँदै गएका परम्परागत कोल, घट्टा, कपडा तान जस्ता घरेलु उद्योगसमेत आधुनिक ढंगबाट सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छु ।
काभ्रे कृषि र पशुमा अत्यन्तै सम्भावना बाकेको जिल्ला हो । हामीले बाहिरी जिल्लाबाट कच्चा पदार्थ ल्याउनेभन्दा पनि हाम्रो जिल्लामा कच्चा पदार्थका रूपमा पाइने चीजमा लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
यहाँ कच्चा पदार्थका रूपमा दूध, आलु र गोलभेडा प्रशस्तै पाइन्छ । यसलाई हामीले उद्योगको रूपमा विस्तार गर्ने हो भने कच्चापदार्थमा आश्रिम उद्योगबाट मुक्ति पाउँछौँ । हामी राजधानीबाट नजिक छौं । यहाँ उत्पादन भएका सामान मुख्य बजारसम्म पु¥याउन खास अप्ठ्यारो छैन ।
झन् अहिले बिपी राजमार्ग खुलेपछि तराईसहित पूर्वी पहाडका जिल्लासम्म हाम्रो पहुँच नजिकिएको छ । अरनिको राजमार्गको सूर्यविनायकदेखि धुलिखेलसम्मको सडकखण्ड ६ लेन बनाउन पहल गरिरहेका छौं । यदि यसो भयो भने राजधानीसँगको हाम्रो दुरी अझ छोटो हुनेछ । लगानी गर्न चाहने ब्यवसायीले ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्ने वातावरण काभ्रे जिल्लामा छ ।
लगानीको वातावरण छ त भन्नुभयो, तर काभ्रेमा लगानीको सुरक्षा नै छैन भनिन्छ नि ?
पहिलाको जस्तो स्थिति छैन । लामो समयदेखि रिक्त स्थानीय तहको निर्वाचन भएर अहिले जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यभार सम्हालिसक्नुभएको अवस्था छ । अहिले हरेक गाउँपालिका र नगरपालिकालाई अरुभन्दा आफू कसरी अब्बल हुन पाइन्छ भन्ने सोचमा छ ।
त्यसैले लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्ने जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिहरूको पनि हो । किनभने आफ्नो गाउँठाउँमा कलकारखाना, उद्योग खोल्न आउने लगानीकर्ता बिचैमा छाडेर जानु भनेको फेरि अर्को लगानीकर्ता नआउनु सरह हो ।
काभ्रेमा लगानीकर्ताले काम गर्नु पहिल्यै गुण्डालाई पैसा नबुझाई केही गर्न पाउँदैनन् भनिन्छ नि ?
अहिलेसम्म त्यस्तो त सुन्नमा आएको छैन । यदि त्यस्तो भए त्यो ठाउँकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ ।
तपाईंहरूलाई आरोप लाग्ने गर्छ अधिकांश उद्योग सहर केन्द्रित भए भनेर । गाउँमा किन जान चाहनुहुन्न ?
स्वभावैले ब्यापार व्यवसाय जहाँ मानिसको बढी बसोबास हुन्छ त्यहाँ नै हुने बढी हुने गर्छ । तर वातावरणीय हिसाबले पनि उद्योग कलकारखाना सहरमा भन्दा गाउँमै खुलेको राम्रो ।
यसैलाई मध्यनजर राख्दै हामीले जिल्लामा नयाँ थपिएका नगरपालिकामध्ये नमोबुद्ध र पाँचखाल नगरपालिकामा नगर उद्योग समन्वय समिति गठन गरिरसकेका छौं । त्यस्तै मण्डनदेउपुर नगरपालिकामा छिट्टै नगर उद्योग समन्वय समिति गठन गर्ने तयारीमा छौं । धुलिखेलमा पहिलेदेखि नै छ, पनौतीमा हालहालै उद्योग वाणिज्य संघ गठन भइसकेको छ ।
बनेपामा जिल्ला वाणिज्य संघले नै कभर गर्छ । त्यत्ति मात्रै होइन, हामीले गाउँ तहमा भएका उद्योगका सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर गाउँपालिकामासमेत जाने योजना बनाइरहेका छौं । यसो भयो भने गाउँ तहमा पनि साना ठूलो उद्योग सञ्चालनमा आउँछन् र गाउँ छाड्ने प्रवृत्ति कम हुन सक्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।
ठूला लगानीका माझ साना लगानी भएका व्यवसायीपछि परेको गुनासो पनि छ नि ?
मलाई लाग्छ लगानी सानो ठूलो भन्ने नै होइन । हामीले सबैलाई समान व्यवहार गरेका छौं र मेरो कार्यकालमा पनि कसैलाई काखा र कसै पाखा हुने छैन । सबै मिलेर नै जिल्लामा रोजगागरको अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
हामीले यहाँको सम्भावनाका बारे प्रवद्र्धन गर्ने हो । हामीले काभ्रेलाई उत्कृष्ट आर्थिक गन्तव्य बनाउनुपर्छ । चाहे त्यो ठूलो लगानी होस्, या त सानो नै किन नहोस् । सम्भावनाको पहिचान गरेर सम्भावित लगानीकर्ता भिœयाउन म र मेरो कार्यसमिति लागी पर्ने छ ।
पक्कै पनि । बनेपा अहिले पनि राजधानीपूर्वका जिल्लाको मुख्य ब्यापारिक केन्द्र हो । पाँचखालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र बन्दै छ । चीनसँगको नाका जोडिएको तातोपानीसँग नजिकको जिल्ला पनि हो । धुलिखेल आफैंमा होलटहरूको हब भइसकेको छ । त्यस्तै नगरकोट आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकको रोजाईमा पर्ने थलो हो ।
नयाँ गन्तव्यका रूपमा गाउँघर नियाल्दै होटलका परिकारका लागि बन्थलीमा धमाधम रिसोर्ट खुल्ने क्रम चलिरहेको छ । धार्मिक पर्यटनका लागि नमोबुद्ध, चण्डेश्वरी, गोसाईथान, तेमालको पोखरी, नारायणस्थान, जिल्लाकै सबैभन्दा अग्लो डाँडा ढुंकखर्कको बेथानचोक डाँडा, पनौती जस्ता ठाउँ हाम्रै जिल्लामा छन् । इन्द्रावती, सुनकोशी, रोशीमा पनि हामीले पर्यटन प्रबद्र्धन गर्न सक्छौं । भूकम्पपछि थलिएको जिल्लाको पर्यटन क्षेत्र अहिले पूर्णरूपमा सञ्चालनमा छ ।
सुविधा सम्पन्न दुई वटा अस्पताल छन् । सुरक्षाको कुरा गर्ने हो भने एसपीको कमाण्डमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय र एसएसपीको नेतृत्वमा बाग्मती अञ्चल प्रहरी कार्यालय काभ्रेमै छ । अनि यस्तो जिल्लामा लगानी नगरे कहाँ गर्ने त ? त्यहि भएर हाम्रो जिल्लामा अन्य ठाउँका व्यवसायी पनि लगानी गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ ।
आर्थिक हब त बनाउने तर पलायन हुँदै गरेका व्यवसायीलाई कस्ले रोक्ने ?
हामीले व्यवसायी पलायन रोक्न पहल गरिरहेका छौं । तपाईंले भने जसरी व्यवसायी पलायन भएको अवस्था छैन । तर पनि बेलैमा उनीहरूको लगानी सुरक्षित हुने वातारण निर्माण गर्ने, समस्या बुझ्ने र समाधान गर्ने समन्वयको काम हामी गर्छौं ।
व्यवसाय पलायन रोक्न राज्यले पनि ठोस पहल गर्नुपर्छ । काभ्रे उद्योग वाणिज्य संघमा अहिले २२ सदस्य हुनुहुन्छ । तर बनेपामा धेरै ब्यापार व्यवसायमा संलग्न साथीहरू थपिँदै गइरहनुभएको छ । हामी उहाँहरूलाई पनि संघमा आबद्ध गराउने तयारीमा छौं ।
काभ्रेमा लगानी भिœयाउन राज्यले चाहिँ के गरिदियो भने सजिलो हुन्थ्यो ?
हेर्नोस्, राज्यले सबैभन्दा पहिले पाँचखालमा निर्माण हुँदै गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज निर्माणमा तदारुकता देखाउनुपर्छ । सेज निर्माण भएर सञ्चालनमा आउनु नै जिल्लामा लगानी भित्रने मुख्य वातावरण बन्नु हो । सेजसँग जिल्लाका धेरै व्यवसायीको आशा जोडिएको छ ।
कामदार र कच्चा पदार्थ मुख्य चुनौती
काभ्रेमा उद्योगको सम्भावना जति छ त्यो भन्दा बढी चुनौती रहेको बताउँछन् जिल्लाका व्यवसायीहरू । २०७२ साल वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पपछि प्रभावित बनेको उद्योग व्यवसाय लयमा त फर्किएको छ, तर मजदुर अभाव तगारोको रूपमा रहेको उनीहरूको भनाई छ ।
काभ्रे उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष एवं वाणिज्य संघका केन्द्रीय सदस्य सुरकृष्ण बैद्य सम्भावनासँगै चुनौती पनि उत्तिकै रहेको बताउँछन् । “यहाँ लगानीका लागि सम्भावना नभएको होइन,” उनले भने “तर कामदार मुख्य चुनौती बनिरहेको छ ।” कतिपय बेला व्यवसायी र मजदुरबीचको विवाद पनि समस्याका रूपमा देखा पर्ने गरेका छ ।
जिल्लामा अहिले मजदुर पाउनै मुस्किल छ । त्यसमा पनि दक्ष कामदारको संख्या निकै कम छ । मजदुर पाइहाले पनि ज्याला धान्नै नसकिने गरी महँगो पर्ने गरेको ब्यवसायीहरू बताउँछन् । राजधानीबाट नजिक भएकाले पनि यहाँ धेरै खालका व्यक्तिको उपस्थिति पाइन्छ । धुलिखेल, नगरकोटमा झन्डै एक दर्जनका हाराहारीमा ठूला होटल छन् ।
अति विशिष्ट द्वारिकाज, टिवीआई ग्रुपले सञ्चालन गरेको धुलिखेल माउन्टेन रिसोर्ट, धुलिखेल लज रिसोर्ट, मिरावेल रिसोर्ट, हिमालय होराइजन जस्ता नाम चलेका होटलमा जिल्लाभित्रकै दक्ष कामदार निकै कम छन् । व्यवसायीहरूले चुनौतीका रूपमा कच्चा पदार्थलाई समेत लिने गरेका छन् । कच्चापदार्थका अभाव नाकाबन्दीका बेला धेरै उद्योग बन्द गरेर बस्नुपरेको उनीहरूको भनाई छ ।
क्षेत्रीय होटल संघ काभ्रेका अध्यक्ष प्रेमकण्ठ मकाजु श्रेष्ठका अनुसार जिल्लामा कम्तिमा साढे १ करोडदेखि ५०÷६० करोडसम्मका लगानीका होटल रहेका छन् । यो हिसाबले हेर्दा ठूला र मझौला गरी ७ अर्बभन्दा बढी होटलमा मात्रै लगानी भइसकेको छ । यी होटलले राजधानी, पोखरा, चितवनलगायतका ठाउँमा रहेका होटलको भन्दा राम्रो सुविधा दिइरहेको उनका भनाई छ । तर काभ्रे उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रकाश मानन्धर ठूलाठूला उद्योग जिल्लामा भित्रिन नसक्नुलाई कामदारकै चुनौतीका रूपमा लिन्छन् ।
“हामीले पुराना शैलीका घरेलु उद्योगलाई परिमार्जित गरेर पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि समस्याका रूपमा देखेपरेको छ,” उनले भने, “नयाँ उद्योग स्थापना र पुरानाको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने हामीसँग चुनौती छ ।” व्यवसायीहरूले पाँचखालको विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजलाई औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।
लगानी र अवसर वृद्धि
काभ्रेमा ठूला उद्योग कलकारखाना सञ्चालनमा नभए पनि लगानी भने निकै बढेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । भूकम्प र नाकाबन्दीपछि सबै व्यवसायीले नयाँ ढंगबाट लगानी बढाएको काभ्रे उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष सुरकृष्ण बैद्यले बताए ।
“भूकम्प र नाकाबन्दीपछि जिल्लामा लगानी निकै भित्रिएको छ,” उनले भने “यसैमा सन्तुष्टि हुनुपर्ने ठाउँ त छैन, तर पनि विस्तारै लगानीकर्ताहरू काभ्रेतर्फ अघि बढी रहेको देखिन्छ ।”
जिल्लामा होटलबाहेक क्रसर, इँटा भट्टा, औषधिलगायतका ३५ वटा उद्योग, कलकारखाना सञ्चालनमा छन् । सहरउन्मुख ठाउँमा इँटा भट्टाको चिम्नी देख्न पाइन्छ । त्यस्तै इन्द्रवाती, रोशी नदीमा क्रसर उद्योग खुलेका छन् । यी उद्योगबाट उत्पादन भएका निर्माण सामग्री उपत्यकासहितका बाह्य जिल्लामा समेत निर्यात हुने गरेका छन् ।
त्यस्तै सहरमा चाउचाउ कारखाना, गोदाम, राइस मिलजस्ता खाद्य उद्योग सञ्चालनमा छन् । यी उद्योगमा कम्तिमा ५ करोडदेखि १ अर्बभन्दा माथिको लगानी रहेको बैद्यले बताए । यी उद्योगले कम्तिमा ४०÷५० जनालाई रोजगारी दिइरहेका छन् । “आफ्नो जिल्लाका युवा आफ्नै गाउँ टोलमा राख्ने हो भने ठूलाठूला उद्योग कलकारखाना सञ्चालनमा आउन निकै जरुरी छ,” वैद्यले भने, “अनि मात्रै समृद्ध परिवार, समुन्नत जिल्ला र राष्ट्र बनाउन सकिन्छ ।”
राजधानीको बढ्दो चापलाई ध्यानमा राखेर जिल्लामा ५ तारे होटलसमेत आवश्यक रहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । साँगादेखि दोलालघाट हुँदै सिन्धुपाल्चोक जाने पर्यटकको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । “सेवासुविधाको अभावमा कोही पनि पाहुना फर्किनु नपरोस्,” उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मानन्धरले भने, “जिल्लामा उद्योगधन्दा सञ्चालनका लागि हामी गर्नुपर्ने जति सहयोग गर्न तयार छौं ।”
जिल्लामा यातायात ब्यवसायमा पनि लगानी निकै बढी रहेको पाइन्छ । जिल्लामा अहिले काभ्रे बस व्यवसायी संघ र काभ्रे मिनीबस व्यवसायी संघ गरी दुईवटा संघमार्फत बस सञ्चालन भइरहेका छन् । पहिलेका बस प्रायः हाइड्रोलिक बनिसकेका छन् । एकपछि अर्को बस सुविधा युक्त थपिने क्रम चलिरहेको छ ।
काभ्रे उद्योग व्यवसाय उद्योग वाणिज्य संघ